Kooxaha Paris Saint-Germain iyo Chelsea oo u gudbay wareega afar dhamaadka tartanka tartanka Champions League… +SAWIRRO
Tuesday, April 13, 2021 - 22:26
(Paris) 13 Abriil 2021. Kooxda Bayern Munich ayaa kaga soo adkaatay 0-1 kooxda Paris Saint-Germain oo ay ku booqatay garoonka Parc des Princes, kulankii lugta labaad wareega siddeed dhamaadka tartanka Champions League, laakiin PSG ayaa u gudubtay wareega xiga ee afarta maadaama ay kulankii lugta ay ku soo adkaatay 2-3, waxayna cel-celis ahaan ku soo baxday 3-3, maadaama ay 3 gool banaanka ku soo dhalisay.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Bayern Munich.
Daqiiqadii 40-aad kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka dhigay Eric Maxim Choupo-Moting, kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis David Alaba.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 0-1 ay kaga soo adkaatay Bayern Munich kooxda Paris Saint-Germain oo ay ku booqatay garoonka Parc des Princes, balse PSG ayaa iska xaadirisat wareega xiga ee afar dhamaadka tartanka Champions League.
Dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa jaratay tikitkeeda wareega afar dhamaadka tartanka Champions League, inkastoo naadiga FC porto ay ku adkaatay 0-1, balse kooxda reer England ee Bleus ayaa ciyaartii lugta hore ku soo adkaatay 0-2, waxayna cel celis ahaan ku soo baxday farqi goolal ah 2-1.SAWIRRO:Gool FM.
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Chelsea iyo FC Porto ee tartanka Champions League oo la shaaciyey
Tuesday, April 13, 2021 - 19:55
(London) 13 Abriil 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Chelsea iyo FC Porto wareega Siddeed dhamaadka Champions League ayaa la shaaciyey.
Kooxda Chelsea ayaa soo dhaweyn doonta naadiga FC Porto si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta labaad wareega Siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League.
Pulisic ayaa hoggaaminaya oo Havertz kula bilowday safka hore, xilli Werner uu ku jiro keydka Blues.
Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Chelsea iyo FC Porto kulanka lugta labaad wareega Siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League.SAFAFKA RASMIGA EE LABADA KOOXOOD HALKAAN HOOSE KA EEG:-Chelsea XI:FC Porto XI:Gool FM.
(Paris) 13 Abriil 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich wareega Siddeed dhamaadka Champions League ayaa la shaaciyey
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Bayern Munich si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta labaad wareega Siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League
Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich kulanka lugta labaad wareega Siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League.SAFAFKA RASMIGA EE LABADA KOOXOOD HALKAAN HOOSE KA EEG:-Paris Saint-Germain XI:
Tonight’s Starting XI! # |#UCL
Bayern Munich XI:Gool FM.
Tuesday, April 13, 2021 - 15:08
Si kastaba ha ahaatee, ereyada ay is dhaafsadeen macallimiinta Spurs iyo Man United ayaa reebay cinwaanno xiiso badan.Gool FM.
Dhanka kale, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa hoggaanka u heysa loollanka loogu jiro saxiixa Aguero, taasoo shaki badan gelineyso halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka Sergio Aguero.Gool FM.
Kulammada lugta labaad ee wareegga nus-dhammaadka ayaana la ciyaari doonaa 4-ta iyo 5-ta bisha May kahor inta aan fiinaalka lagu ciyaarin Istanbul 29-ka bisha May.Gool FM.
Barcelona oo hor kaceysa kooxaha dunida ugu qaalisan… (Yaa ku jira SHANTA sare?)
Tuesday, April 13, 2021 - 13:59
(Yurub) 13 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa hoggaamineysa kooxaha ugu qaalisan kubadda cagta dunida, iyadoo haatan qiimaheeda uu gaarayo 4.76 bilyan oo doollar.
Majaladda ka faalloota qiimeynta dhaqaale ee xiddigaha iyo kooxaha isboortiga noocyadiisa kala duwan ee Forbes ayaa soo bandhigtay kooxaha ugu qaalisan dunida marka la eego qiimaha ay suuqa ka joogaan wadar ahaan xiddigaha ay heystaan.
Waxaa diiwaankan booska labaad kaga jira Real Madrid oo lagu qiimeeyon 4.75 bilyan oo doollar, halka Bayern Munich oo booska saddexaad ku jiratana qiimaheedu uu noqday 4.21 bilyan oo doollar.
Manchester United ayaa booska afaraad kaga jirta liiskan iyadoo lagu qiimeeyay 4.2 bilyan oo doollar, waxayna ka sarreysaa naadiga ay aad u xafiiltamaan ee Liverpool oo qiimaheedu uu gaarayo 4.1 bilyan oo doollar.
Si kastaba ha ahaatee, marka laga soo tago shanta sare, waxaa 10-ka sare ee liiskan markii ugu horreysay soo galay kooxda Paris Saint-Germain oo haatan qiimaheedu uu yahay 2.5 bilyan oo doolllar.
Tan iyo markii shirkadda Qatar Sports Investments ay la wareegtay kooxda PSG, naadiga reer France ayaa sameyneysay is baddelo wanaagsan oo dhanka ciyaaraha iyo dhaqaalaha ah.Gool FM.
Tuesday, April 13, 2021 - 13:11
Si kastaba ha ahaatee, waxay majaladda England kasoo baxda intaas ku dareysaa in 27-jirkan uu xiiso ka helayo Paris Saint-Germain haddii ay xagaagan lumiso Kylian Mbappe.Gool FM.
Tuesday, April 13, 2021 - 12:32
“Kaddib markii la waayay wax ka badan hal musharrax oo u tartamaya xilka madaxweynaha, sida uu qabo qodobka 40-aad, xarafka E, firqada labaad ee dastuurka kooxda, Mr Florentino Perez Rodriguez ayaa ah madaxweynaha Real Madrid” ayay qoraal ku shaaciyeen guddiga doorasha ee uu madaxda u yahay Jose Manuel de Carlos Grau.Sidaas darteed, kala sarreynta maamulka Real Madrid ayaa ah sidan:-
Madaxweyne: Florentino Perez RodriguezMadaxweyne ku xigeen: Fernando Fernandez Tapias, Eduardo Fernandez de Blas and Pedro Lopez Jimenez.Xog-haye: Enrique Sanchez GonzalezXubnaha: Santiago Aguado Garcia, Jeronimo Farre Muncharaz, Enrique Perez Rodriguez, Manuel Cerezo Velazquez, Jose Sanchez Bernal, Manuel Torres Gomez, Gumersindo Santamaria Gil, Raul Ronda Ortiz, Jose Manuel Otero Lastres, Nicolas Martin-Sanz Garcia, Jose Luis del Valle Perez, Catalina Minarro Brugarolas.Gool FM.
“Waan ku celinayaa Kylian Mbappe wuxuu ka ciyaari doonaa Kooxda Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda” – Pedrerol
Tuesday, April 13, 2021 - 11:44
(Madrid) 13 Abriil 2021. Josep Pedrerol ayaa si adag u aaminsan inuu Kylian Mbappe ku dambeyn doono inuu ku biiro Kooxda Real Madrid xagaagan.
Weeraryahanka Kooxda Paris Saint-Germain ayaa heshiiskiisa haatan waxa uu ku eg yahay dhammaadka sanadka 2022, waxaana jira warar sheegaya in Los Blancos ay awoodi doonto inay heshiis la gaarto kooxda reer France xagaagan, haddii Mbappe uusan qalinka ku duugin heshiis cusub.
“Waan ku celinayaa in Mbappe wuxuu ka ciyaari doonaa Kooxda Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda” ayuu Pedrerol u sheegay xalay El Chiringuito.
“Ma aqbali doono heshiis cusbooneysiinta PSG, wuxuuna ku kalsoon yahay in kooxdu ay diyaar u tahay inay dejiso qiimo macquul ah oo lagu heli karo isaga, madaama uu hal sano uga harsan yahay qandaraaskiisa, waxaana uu aad u doonayaa inuu ku biiro Real Madrid.” ayuu ku daray hadalkiisa Josep Pedrerol.
Josep Pedrerol oo ah Suxufi ka soo jeeda Catalan ayaa hadalkaan oo kale 07 bishan April u sheegay El Chiringuito.Gool FM.
RASMI: Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos oo uu ku dhacay Korona Fayras
Tuesday, April 13, 2021 - 10:36
(Madrid) 13 Abriil 2021. Daafaca dhexe ahna kabtanka Kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa laga helay Korona Fayras.
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ku dhawaaqday in kabtankeeda Sergio Ramos uu haleelay caabuqa saf marka ah ee KOFID 19.
Ramos ayaa garoomada kaga maqan dhaawac soo gaaray intii lagu guda jiray ciyaaraha caalamiga ah, lamana filayo inuu dib ugu soo laabto shaxda koxodiisa maalmaha yar ee lagu soo aaddan, sidaas darteed waxa uu haatan Ramos waqti badan ku qaadan doonaa inuu safka kooxda kaga maqnaado ka soo kabashada Korona Fayras.
Raphael Varane ayaa sidoo kale laga heshay Korona Fayras todobaad ka hor, welina ma awoodo inuu ku soo laabto kooxda Los Blancos.
Eder Militao iyo Nacho Fernandez ayaa ku soo bilowday kulamadii ay la kala ciyaareen Liverpool iyo Barcelona maalmihii la soo dhaafay, waxaana ay u badan tahay inay howshooda ka ciyaarista daafaca dhexe sii wadan doonaan kulammada soo aaddan.
Kulanka soo aaddan waxa ay Real Madrid la leedahay habeen dambe Kooxda Liverpool oo ay lugtii hore ee siddeed dhammaadka Champions League uga soo adkaatay 3-1.Gool FM.
Waa kuma Weeraryahanka ay bartilmaameedsanayso Kooxda PSG haddii uu Kylian Mbappe diido inuu heshiiska u kordhiyo?
(Paris) 13 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta PSG ayaa si horudhac ah loo sii ogaaday weeraryahanka ay doonayso inay bartilmaameed ka dhigato haddii Kylian Mbappe uu diido inuu heshiiska u kordhiyo.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Faransiiska ee PSG ayaa indhaha ku haysta xiddiga Dortmund ee Sancho oo bartilmaameedsanaysa haddii Mbappe uu diido inuu heshiis cusub qalinka ugu duugo.
Warsidaha The Athletic ayaa warinaya in Kooxda Paris Saint-Germain ay diyaar u tahay inay bartilmaameed ka dhigato ciyaaryahanka Borussia Dortmund ee Jadon Sancho haddii uu Kylian Mbappe diido inuu kordhiyo heshiiska uu ku joogo garoonka Parc des Princes.
PSG ayaa ku dhibtooneysa inay Mbappe ka saxiixato heshiis cusub, waxaana laga yaabaa inay go’aansadaan inay lacag ku helaan saxiixa weeraryahanka ka hor inta uusan noqon beeca xorta ah sanadka 2022-ka.
Kooxda difaacanaysa horyaalka Faransiiska ayaa durba u kabo gashatay sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd Sancho si uu u buuxiyo booska Mbappe, iyadoo Dortmund ay diyaar u tahay inay dhageysato dalabyada u imaanaya xiddigan garabka ka ciyaara suuqa xagaaga.Gool FM.
Xiddig ka tirsan AC Milan oo iska diiday heshiis kordhin ay u soo bandhigtay Kooxdiisa
(Milano) 13 Abriil 2021. Sida wararku ay sheegayaan ciyaaryahan ka tirsan AC Milan ayaa iska diiday dalab heshiis kordhin ah oo ay u soo bandhigtay kooxdiisa reer Talyaani.
Franck Kessie ayaa hoos u dhigay oo iska diiday dalab heshiis kordhin ah oo ay kooxdiisa AC Milan doonaysay inay qandaraaskiisa ku ballaariso.
Rossoneri ayaa u soo bandhigtay laacibkan khadka dhexe heshiis cusub oo uu ku qaadanayo mushahar dhan 3.5 milyan oo euro, laakiin Franck Kessie ayaa hoos u dhigay heshiiskaas oo iska diiday sida ay warinayso shabakadda reer Talyaani ee Calciomercato.Gool FM.
Waa tee Kooxda uu Weeraryahanka Barcelona ee Ousmane Dembele Albaabada u furay inuu ku biiro?
(Barcelona) 13 Abriil 2021. Ousmane Dembele ayaa la soo warinayaa inuu isaga tagi doono Barcelona si uu ugu biiro kooxda uu rabo inuu dhankeeda u dhaqaaqo.
Shabakadda Calciomercato ayaa warinaysa in Weeraryahanka Barcelona ee Ousmane Dembele uu Albaabada u furay inuu ku biiro kooxda Juventus ee ka dhisan dalka Talyaaniga.
Xiddiga garabka ka ciyaara ee reer France ayaa la la xiriirinayey inuu ka tagi doono garoonka Camp Nou, waxaana hadda la warinayaa inuu isagu doonayo inuu u dhaqaaqo kooxda ka dheesha horyaalka Serie A ee Juventus.
Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa hore u soo bandhigtay xiisaha ay u qabto saxiixa Ousmane Dembele, iyadoo doonaysa inay la wareegto xagaagan.
Ilaa iyo hadda wax war ah oo ku aaddan arrinta Ousmane Dembele kama soo bixin Barcelona, lama faah-faahin heshiiska uu xiddigan reer France ku doonayo inuu ku aado Magaalada Turin.Gool FM.
Man United oo doonaysa inay xagaagan dib ula soo saxiixato Cristiano Ronaldo… (Maxay adeegsan doontaa Red Devils si ay CR7 dib ugu soo celiso Old Trafford?)
(Manchester) 13 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay doonayso inay xagaagan dib ula soo saxiixato Cristiano Ronaldo, maadaama haatan ay xaqiijiyeen u soo bixitaankooda Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Kooxda Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa guul soo laabasho ah 3-1 ka soo qaadatay Tottenham Hotspur oo ay booqdeen, waxaana haatan ay sagaal dhibcood oo nadiif ah ka sarreeyaan kooxda kaalinta shanaad ku jirta ee Chelsea, iyadoo ay harsan tahay in kaliya la ciyaaro horyaalka Todobo kulan.
Sida ay warinayso Jariiradda Calciomercato, Man United ayaa wax waliba u hureysa sidii ay ugu dhammaysan lahayd afarta sare ee horyaalka Premier League si ay Ronaldo ugu qanciso inuu dib ugu soo laabto garoonka Old Trafford, kaddib 11-sano ka hor markii uu tagay oo lacag rikoorka adduunka ah ugu biiray Real Madrid.
Heshiis kasta oo suurtagal ah waxaa sidoo kale ku lug yeelan kara laacibka khadka dhexe ee Paul Pogba inuu u dhaqaaqo dhanka kale isla markaana uu u saxiixo Juventus.
Wakiilka Pogba ee Mino Raiola ayaa sanadkii hore ku dhawaaqay in xiddiga uu wakiilka u yahay uusan ku faraxsanayn Old Trafford, isla markaana uu doonayo inuu baxo, si kastaba ha ahaatee wali ma cadda sida uu laacibkan reer France wali u doonayo inuu baxo dhammaadka xilli ciyaareedkan ama inuu naftiisa u hibeeyo Red Devils.
Inkastoo uu dhaliyay 25 gool oo horyaalka Serie A ah 27 kulan oo uu saftay, rajada Ronaldo ee ah inuu ka caawiyo Juventus inay hanato horyaalkeedii 10-aad ee isku xigta haatan uma badna inay dhacdo, maadaama Inter Milan ay ka horeyso 12 dhibcood, iyadoo 8 kulan ay ka harsan tahay in la ciyaaro horyaalka.Gool FM.